Achiziva Rethinking: Enyu Rwendo Rwoupenyu, Chikunguru 2021
Nei Iyo Yakanyarara Kurapa Inoenzana kune Kushungurudzwa Kwemanzwiro & Sei Kupindura
Kurapa chinyararire kunogona kushandiswa zvakanyanya, asi kana iwe ukatarisa padyo, iwe unozoona iri imwe nzira yekushungurudzwa pamoyo nepfungwa.
Ungachinje Sei Hupenyu Hwako Kuti Ugoita Zvirinani: Iyo chete 2 Nzira dzaunogona kutora
Kana iwe uchida kushandura hupenyu hwako munzira ipi neipi ine chinangwa, pane chaiko chete nzira mbiri dzekuita nezvazvo. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye nemaonero ako panjodzi, imwe ingangokwana iwe zvirinani pane imwe. Dzidza zvavari uye nzira yekusarudza pakati pavo.
8 Kupenya Zviratidzo Iwe Une Mupfungwa Uye Nekushushikana MuneMweya (+ Chii Chaunofanira Kuita Nezvazvo)
Wakaneta mupfungwa here uye nemupfungwa? Wakaneta here kusvika padanho rekutsemuka? Tarisa zviratidzo izvi zvisere UYE kudzidza kuti unzwe zvirinani.
Iwe une hanya zvakanyanya here izvo vamwe vanhu vanofunga? Tsvaga zvikonzero nei uchinetseka zvakanyanya uye dzidza nzira dzekutarisira zvishoma zvinofungwa nevamwe pamusoro pako.
6 Nzira dzeKuti Mukomana Wako Atsvage (Pasina Kumumanikidza)
Uri kumirira kuti mukomana wako akuudze iwe? Unoda kumuita kuti aburitse mubvunzo nekukurumidza? Edza aya asina-kumanikidza maitiro.
Chii Chinokonzera Kutya Kwevanhu Vazhinji Kutaura (+ 8 Mazano Ekuti Ungakunde Sei)
Nei tichiwana kunetseka paruzhinji kutaura? Ungakunda sei kutya kwako kutaura pamberi pevanhu? Shandisa aya matipi kune ako anotevera kutaura kana mharidzo.
Maitiro Ekuti Ugadzikane Mune Rako Rako Ganda: 17 Hapana Bullsh * t Matipi!
Kuti uve wakasununguka muganda rako pachako, ugare wakasununguka semunhu, ingo tevera aya gumi nemanomwe matipi. Wagadzirira kutanga here?
8 Zvikonzero Zvako Zvekuchengetedza Hunhu Zvinokuita Kuti Uve Akasimba, Kwete Vasina Simba
Shamwari dzako dzinogona kukutsanangura iwe seane hanya, asi vangati une simba here? Zvimwe vanofanira kuzviita.
Kuneta Kwakadii Kunogona Kungave Kunokonzera Kuneta Kwako
Iwe unonetseka here kuti urambe uine simba uye uchikurudzirwa? Iwe unogona here kunge uchitambura nekuvapo kuneta? Tsvaga zvimwe pamusoro peichi chiitiko pano.
Zvekuita Kana Iwe Uchinzwa Senge Uri Munhu Akashata Munhu
Iwe unonetseka here kuti hausi munhu akanaka, asi akaipa, pamwe anototyisa? Dzidza maitiro ekupokana nepfungwa idzi uye unzwe zvirinani nezvako.
20 Misungo Vanhu Vazhinji Vanowira Mune Hupenyu Hwavo
Nzira yehupenyu yakazara nemisungo inowira vanhu vasina fungidziro. Tsvaga kuti ndeipi misungo iyi kuitira kuti iwe ugone kudzivisa kuve yavo inotevera vanobatwa.
Kutya Kushamwaridzana: Zvinokonzera, Zviratidzo, Uye Maitiro Ekukunda Izvo
Ko kutya kushamwaridzana kunoita sei? Ndezvipi zviratidzo? Chii chaungaite kuti ukurire? Tsvaga zvimwe nezve matambudziko nehukama hwepedyo.
Uri Kurasa Kutenda Muvanhu Here? Heino Maitiro Ekudzoreredza.
Wakarasa kutenda kwese muvanhu here? Tsvaga maitiro ekudzoreredza nekuwanazve rutendo irworudzi nekungoita zvinhu zvakapfava zvinomwe. Tsvaga tariro yako zvakare.
Iwe uri wekudanana asina tariro? Kana iwe uchizviziva iwe mune izvi gumi zviratidzo, iwe unonyatso kuve nerutivi rwakanyanya kudanana kwauri.
Kana Iwe Ukatarisa Chero cheZvinhu zvitanhatu izvi, Pfungwa Dzako Dzisingazive Iri Kuedza Kukuudza Iwe Chinhu
Chikamu chisingazive chepfungwa dzako chinoita zvakawanda kwauri, asi zvakare chinotaurirana nepfungwa dzako dzinoziva nguva nenguva.
Ungaita Sei Kuroora Uye Kufara Mushure Hurefu Hukama Kupera
Mushure mekunge hukama hwakareba hwaenda kumaodzanyemba, zvinowanzoomera kunakidzwa nekuve usina kuroora zvakare. Shandisa iri rairo kuti shanduko ive inotsvedza sezvinobvira.
Kupindwa muropa Mune Vakanyanya Vanonzwisisa Vanhu: Sei Vazhinji Vachiwira Mumusungo
Sei zvichidaro kuti vanhu vazhinji vane hukasha vanoguma vapindwa muropa? Uye ndeapi matanho avanogona kutora kana vakadaro?
Maitiro Ekuita Newa Partner Asinga Vimbe Newe: 4 Anokosha Matanho!
16 Zviratidzo Mwana Wako Ipfungwa + Matipi Ekuvarera
Maitiro Ekusvitsa Kwako Kwakakwana Kugona: 11 Hapana Bullsh * t Matipi!
Maitiro Ekuti Upfuure Nemazuva Paunoshaya Mumwe Munhu Akapasa
7 Nzira Dzakanyanya Kubudirira Dzivisa Nharo Muhukama
Zvinhu zvitanhatu Zvakanyanya Vanonzwisisa Vanhu Vanoda Kuti Iwe Unzwisise
14 Zviratidzo Zvakajeka Mumwe Munhu Ari Kukushandisa: Maitiro Ekuudza Chokwadi
Ehe, Unofanirwa Kumuudza / Iye Kuti Iwe Wakabiridzira. Heino Maitiro Ekuzviita.
Kana iwe uri munhu anonzwira tsitsi kana mumwe munhu ane hanya zvakanyanya, gwara rekupona iri rakakosha chose.
Maitiro EkuZviregerera Iwe pachako: 17 Hapana Bullsh * t Matipi!
Tsvaga maitiro ekuzvikanganwira iwe kana iwe ukaita chimwe chinhu chaunodemba gare gare. Aya matipi gumi nemanomwe anogona kukubatsira kukurumidza maitiro ekuregerera.
7 Zvinhu Zvaunoda Kuti Urege Kutarisira Kubva Kune Vamwe
Kuvaka zvinotarisirwa nevamwe vanhu zvinogona kutungamira mukuodzwa mwoyo. Kurega izvo zvinotarisirwa zviri nyore kana iwe uchinge waziva zvavari.
Ndeupi Mhando Yemukadzi Ndiwe Chaizvoizvo? (Kunakidza Quiz)
Unogona chete mibvunzo misere inonyatsoratidza hunhu hwako hwehunhu hwevakadzi?
Zvibvunze mibvunzo iyi makumi matatu yekuzvitarisisa nezve hupenyu - HWAKO hupenyu. Iyo inokosha mibvunzo yekufungidzira yerwendo rwako rwekuzvitsvaga.
13 Zviratidzo zveMunhu Akangwara Zvakanyanya
Unoziva sei kana iwe uri munhu akangwara zvakanyanya? Zvakanaka, kana iwe ukaona yakawanda yeiyi 13 zviratidzo mukati mako, iwe unogona kudaro.
Maitiro Ekuita NaVakuru Sibling Rivalry Uye Godo (Kune Mapato Ese)
Pane kukwikwidzana, godo, nekupokana pakati pehama mumhuri yako? Chero rako basa, dzidza maitiro ekugadzirisa aya anodenha masimba.
20 Zvinhu Iwe Chaunofanirwa Kutenda Mairi
Unotenda chii? Chii chaunofanira kutenda mazviri? Izvi zvinhu makumi maviri inzvimbo yakanaka kutanga iwe uchifungisisa pamusoro pezvaunotenda.
7 Zvinhu Zvekuita Kana Iwe Ukabatwa Kubiridzira
Wakambobatwa uchibiridzira here? Hauna chokwadi chekuita zvinotevera? Unoda kuyedza kusevha nekugadzirisa hukama hwako kana imba?
Tora chidimbu cheSMART nhanho mbiri kumberi uye wozvisikira wega ZVINYORWA zvinangwa zvemukana wakanaka wekuzviita. Usagadzirire kune yakasarudzika-isinganzwisisike chinangwa kana iwe uchigona kuseta chimwe chinhu chinonyatso kubatsira kukuendesa kumberi muhupenyu.
Maitiro Ekukura Pfungwa Achachinja Hupenyu Hwako (Uye Maitiro Ekuvandudza Imwe)
Iwe une pfungwa yekukura here kana iwe ungade imwe? Dzidza zvazvinoreva kuva nemafungiro ekukura uye mazhinji mabhenefiti ainounza maringe neyakagadziriswa mindset. Zvese zvakavakirwa padhuze nekunzwika kwesainzi kudzidza naDr Carol Dweck nevamwe vaunoshanda navo.
Vakaroorana Vanogovana Mabasa Vanogovana Rumwe Rudo (Uye Bonde), Inodaro Sayenzi
Kugovaniswa kwakanaka uye kwakaenzana kwemabasa epamba kunotungamira kuhukama hunofadza, rudo rwakawanda, uye kuita bonde zvakanyanya, sekureva kwesainzi ichangoburwa.
chii chatingaite kana isu takasuruvara
nei kubata nguva kuchikosha
sei kutora mutoro wega
dzosa murume kubva kune mumwe mukadzi
mibvunzo yehupenyu yekubvunza mumwe wako